विकासको बाधक आत्महत्या
शिव गौतम,चितवन,भदौ २५ ।
संसारभर समस्याको रूप लिइरहेको आत्महत्याको रोकथाम र समाधानमा आफ्नो सानो समय छुट्याउनु पर्ने समय आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक ४० सेकेण्डमा एउटा मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइन्छ । विश्वमा हुने मृत्युहरूका प्रमुख कारणमा आत्महत्या दशौं स्थानमा रहेको छ । नेपालमा भने हरेक वर्ष औषत ६ हजार ८ सय ४० जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन् । जसमा किशोर र किशोरीहरू बढी हुने गरेका छन् । चितवन जिल्लामा पनि आत्महत्या बिस्तारै चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चितवनमा १३९ जनाले आत्महत्या गरेकामा २०७५/७६ मा सो संख्या १५९ मा उक्लिएको छ । यी दुई आ.व.मा १६ वर्ष मुनिका कूल १६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार २०७४ साउन देखि २०७६ को असारसम्ममा १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका मात्रै कूल ८४ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । ऊर्जावान् युवाहरू नै आत्महत्याको शिकार हुँदा देशलाई असर पर्ने त निश्चित नै छ । उक्त अवधिभर आत्महत्या गर्नेहरूमा १७४ जना पुरुष र १०२ जना महिला रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक शालिग्राम शर्मा भन्छन्, “दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । अहिले हरेक वर्ष नेपालमा लगभग ८ प्रतिशतका दरले आत्महत्याका घटनाहरू वृद्धि हुने गरेका छन् । आत्महत्यालाई रोकथाम गर्न नसके यसले युद्धभन्दा पनि भयानक स्थितिको सृजना गर्न सक्छ । महामारी नै निम्तिने खतरा रहेको छ ।” उनी अझै भन्छन्, “मानिस बाहेक अन्य प्राणीले आत्महत्याको प्रयास गर्दैनन् । हामीले भने आवेशमा आएर ज्यान नै फाल्ने गरेका छौं । जिन्दगीमा आशावादी, सकारात्मक र रचनात्मक भएर बाँच्ने हो भने पनि तनावलाई जित्न सकिन्छ ।” खास गरी डिप्रेसन अर्थात् तनावलाई आत्महत्याको प्रमुख कारण मान्ने गरिएको छ ।
मानिसले जीवनमा विभिन्न प्रकारका इच्छा र चाहना बुनेको हुन्छ । जब उसका इच्छा पुरा हुँदैनन् अथवा ऊ असफल हुन्छ, तब उसले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गर्दछ । पढाईमा हुने असफलता, प्रेम सम्बन्धमा आउने बाधा, पारिवारिक कलह, लगायतका कुरालाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मानिसहरूले मृत्युलाई नै समस्या समाधान गर्ने बाटोको रूपमा रोज्ने गरेका छन् । आत्महत्याको सोच आउँदा अन्य व्यक्तिको साथको आवश्यकता रहने बताउँछन् मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. खगेन्द्र काफ्ले, “आत्महत्या खास गरी डिप्रेसन अर्थात् तनावले हुने विश्वास गरिन्छ । तर नेपालमा भने आवेशमा आएर आफूलाई मार्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । आत्महत्या गर्नेहरूमा युवाहरू नै बढी हुने गरेकाले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा यसले राज्यलाई नराम्रो असर पार्छ ।” काफ्ले भन्छन्, “कतिपय मानिसले आत्महत्याको प्रयास गर्नेलाई घृणाको भावले हेर्ने गरेको पाइन्छ । आत्महत्या रोजेको व्यक्ति कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो वा छ भन्ने बारे कसैले पनि जान्न खोज्दैनन् । मानिसको व्यवहारमा कसैसँग नबोल्ने, एक्लै बस्न रुचाउने, झन्कने वा रिसाउने जस्ता परिवर्तन देखिन थाले भने ऊ तनावमा छ कि भनेर बुझ्न आवश्यक हुन्छ । बिरामी व्यक्तिको मनमा के कुरा खेलेको छ, उसका नजिकका मान्छेले त्यस कुराको पनि जानकारी राख्नु पर्छ ।” उनी जोड्छन्, ” बढी तनाव हुने सैन्य, चिकित्सा वा अन्य प्रकारका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले आत्महत्या गर्न सक्ने सम्भावना अलि बढी रहन्छ । सकेसम्म आफ्नो जीवनशैलीलाई तनावरहित बनाउनुपर्छ ।” कुनै पनि व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउन बेरोजगारी र गरिबीले पनि भूमिका खेल्ने गरेका छन् । तर यसको मतलब जागिरे र पैसा कमाउनेहरूले आत्महत्या गर्दैनन् भन्ने पनि होइन । एक अध्ययनका अनुसार संसारमा सबैभन्दा बढी आत्महत्या गर्नेहरूको सूचीमा डाक्टरहरू समेत पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, खेलाडी, कलाकार वा सेलिब्रेटीहरूमा पनि आत्महत्या गर्ने सम्भावना अत्यधिक मात्रामा देखिने गरेको छ । सामान्य मानिसहरूका लागि सुखी देखिने कलाकारहरू किन आत्महत्या गर्न अघि पर्छन् ? गायक हेमन्त शर्मा भन्छन् , “कुनै पनि सेलिब्रेटी एक समय वाहवाहीमा रमाएको हुन्छ । त्यो वाहवाही सधैं समान रहँदैन । समय बित्दै जाँदा उसको प्रभाव पनि कमजोर हुँदै जान्छ र नयाँ सेलिब्रेटी उदाउँछन् । यो परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्दा पनि सेलिब्रेटीले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् ।” उनी थप्छन्, “आवश्यकताभन्दा बढी इच्छा राख्दा पनि तनाव उत्पन्न हुन्छ ।” साधारणतया मानिस मर्न चाहँदैन । यदि तपाईँका नजिक कसैले पटकपटक मर्न मन लागेको कुरा गर्छ भनी ऊ पक्कै समस्यामा छ भनी बुझ्नुहोस् । ऊसँग समय बिताउनुहोस् र हौसला प्रदान गर्नुहोस् । तपाईंको सानो समयले उसलाई फेर्न सक्छ । आत्महत्याको सोच आउने बित्तिकै आफ्ना अभिभावक, शिक्षक वा साथीका माझ आफ्ना कुरा राख्नुहोस् । जीवन अमूल्य छ, त्यसै खेर नफाल्नुहोस् ।